China ABS resin ọgwụ ịkpụzi Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic resin maka ogwu na ịkpụzi
ABS resin (acrylonitrile butadiene styrene) bụ polymer kachasị eji eme ihe, na ịkpụzi ọgwụ ABS resin bụ nke a na-ahụkarị.
Mestech nwere ọtụtụ ahụmahụ na ABS injection ịkpụzi. Anyị ABS resin injection ịkpụzi ọrụ na-emepụta mmiri na-eji dị iche iche ọrụ na n'ihi na a dịgasị iche iche nke ngwa. Ngwaọrụ anyị ọgbara ọhụụ ga-ewere ọrụ gị ọsọ ọsọ site na mbido ruo n'isi site na nsonaazụ ọma. Plastic ABS resin (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) bụ polymer a na-ejikarị eme ihe. ABS amaara nke ọma maka ezigbo njirimara nke nkwụsi ike akụkụ, gloss, formability na ọgwụgwọ elu Injecton ịkpụzi bụ isi nhazi maka imepụta ngwaahịa ABS.Ngwongwo nke ihe onwunwe nke ABS resin: Oke okpomọkụ: 176 Celsius F 80 Celsius C Obere Okpomọkụ: -4 ° F -20 ° C Autoclave Capable: Ọ dịghị Agbaze Point: 221 ° F 105 ° C Ike ọdụdọ: 4,300psi ekweghị ekwe: R110 UV Nguzogide: Agba Agba: Translucent Specific Gravity : 1.04 ABS resin Ọgwụ na ịkpụzi Uru1.Good eletriki Njirimara 2.Impact eguzogide 3.Excellent chemical eguzogide, karịsịa ka ọtụtụ obi ọjọọ asịd, glycerine, alkalis, ọtụtụ hydrocarbons na alcohols, inorganic salts 4.Combines ike, rigidity na ike na otu ihe onwunwe 5.Excellent ibu nkwụsi ike 6. Fechaa 7.Processing akụkụ kwụsie ike na elu gloss dị mma, mfe agba, agba, nwekwara ike sprayed metal, electroplating, ịgbado ọkụ na bonding na ndị ọzọ nke abụọ nhazi arụmọrụ. 8. ABS nwere ike ime n'ime agba di iche iche dika achoro. Ọ bụrụ na tinye mgbakwunye ọkụ ọkụ ma ọ bụ mgbochi ultraviolet na ABS, enwere ike iji ya mepụta akụrụngwa nke ngwaọrụ dị n'èzí ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị elu.
Ngwa nke plastic ABS resinABS nwere akara ukwu ya n'ọtụtụ dịgasị iche iche n'ihi arụmọrụ ya zuru oke na ike usoro dị mma. Isi ọdịnaya dị ka ndị a: 1. Industrylọ Ahịa Ahịa A na-eji ọtụtụ ABS ma ọ bụ ABS alloys ọtụtụ akụrụngwa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Ọmụmaatụ: dashboard ụgbọala, ahụ mpụta mpụta, ime mma ogwe aka, steeringi wiil, ụda mkpuchi mkpuchi, mkpọchi ụzọ, bọmbụ, ọkpọkọ ikuku na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ABS ka a na-eji eme ihe n'ụgbọala, dịka igbe igbe na igbe igbe sundry. eji ABS na-eguzogide okpomọkụ, akụrụngwa elu na nke ala, ihe nkpuchi mmiri nke ABS, na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ABS dị ka akụrụngwa. Onu ogugu nke ABS eji eji ugbo ala dika ihe dika 10 n'arọ. N'etiti ụgbọ ala ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke akụkụ ABS ejiri mee ihe dịkwa ịtụnanya. Ejiri ABS mee akụkụ ụgbọ ala ahụ, dị ka dashboard na PC / ABS dị ka ọkpọ, a na-esikwa n'elu PVC / ABS / BOVC elu. 2. Electronic and Electrical Appliances ABS dị mfe ịmịnye n'ime shei na akụkụ ndị ziri ezi nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya, ogo siri ike na ọdịdị mara mma. Ya mere, a na-eji ABS eme ihe n'ọtụtụ ebe obibi na obere ngwa, dịka igwe onyonyo, teepu, friji, friji, igwe ịsa ahụ, igwe ntụ ntụ, ihe nhicha ọkụ, igwe faksị ụlọ, igwe okwu na VCD. A na-ejikwa ABS n'ọtụtụ ebe ndị na-ehichapụ ihe na akụkụ nke ABS na-ejikwa ya na arịa kichin. ABS ọgwụ na ngwaahịa ihe karịrị 88% nke ngụkọta plastic ngwaahịa nke refrjiraeto. 3. Office Equipment N'ihi ABS nwere elu gloss na mfe ịkpụzi, ụlọ ọrụ akụrụngwa na igwe mkpa mara mma anya na ezi njikwa, dị ka ekwentị ikpe, ebe nchekwa ikpe, kọmputa, faksị igwe na oyiri, ABS akụkụ na-ọtụtụ-eji. 4.Industrial Equipment N'ihi ABS nwere ezigbo ịkpụzi, ọ bụ uru na-eme ka ngwá Chassis na shei na nnukwu size, obere deformation na mụ size. Dị ka dashboard na-arụ ọrụ, tebụl na-arụ ọrụ, ọdọ mmiri mmiri, igbe akụkụ, wdg.
Ngwaahịa na ebu ebu
1. Mgbidi nke ngwaahịa: Mgbidi nke ngwaahịa metụtara ogologo agbazere agbapụta, nrụpụta mmepụta yana iji ihe achọrọ. Ogo nke kachasị ogologo ABS gbazere na mgbidi mgbidi nke ngwaahịa a bụ ihe dịka 190: 1, nke dịgasị iche na ọkwa. Ya mere, mgbidi ọkpụrụkpụ nke ngwaahịa ABS ekwesịghị ịdị gịrịgịrị. Maka ngwaahịa ndị chọrọ ọgwụgwọ electroplating, mgbidi mgbidi kwesịrị ịdịkarị ntakịrị iji mee ka adhesion dị n'etiti mkpuchi na elu nke ngwaahịa ahụ. N'ihi nke a, a ga-ahọrọ mgbidi nke ngwaahịa ahụ n'etiti 1.5 na 4.5 mm. Mgbe ị na-atụle mgbidi nke ngwaahịa ahụ, anyị kwesịrị ị paya ntị na ịdị n'otu nke mgbidi ahụ, ọ bụghị nnukwu ọdịiche. Maka ngwaahịa ndị dị mkpa ka a bụrụ nke a na-ahọpụta, elu kwesịrị ịdị larịị na nke na-abụghị nke convex, n'ihi na akụkụ ndị a dị mfe ịgbaso na ájá n'ihi mmetụta electrostatic, na-eme ka nkwụsi ike na-adịghị mma. Na mgbakwunye, ịdị adị nke nkuku dị nkọ kwesịrị izere iji gbochie nrụgide nrụgide. Yabụ, okwesiri ịchọ mgbanwe arc na ntụgharị akụkụ, nkwonkwo ọkpụrụkpụ na akụkụ ndị ọzọ.
2. Demould mkpọda: The demoulding mkpọda nke ngwaahịa na-metụtara ya na shrinkage. N'ihi ọkwa dị iche iche, ụdị dị iche iche nke ngwaahịa na ọnọdụ dị iche iche dị iche iche, ịkpụbe shrinkage nwere ụfọdụ esemokwu, n'ozuzu na 0.3 0.6%, oge ụfọdụ rue 0.4 0.8%. Ya mere, nkenke nke akpụ akụkụ nke ngwaahịa dị elu. Maka ngwaahịa ABS, a na-ewere mkpọda mkpọda dị ka ndị a: akụkụ bụ isi bụ ogo 31 n'akụkụ ntụpọ demoulding, akụkụ akụkụ ahụ bụkwa ogo 1 n'ogologo 20 n'akụkụ usoro demoulding. Maka ngwaahịa nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya ma ọ bụ nwee mkpụrụedemede na usoro, mkpọda na-emebi emebi kwesịrị ịgbakwunye n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
3. ejection chọrọ: n'ihi na ndị pụtara ìhè imecha nke ngwaahịa nwere ukwuu mmetụta na arụmọrụ nke electroplating, ọdịdị nke ihe ọ bụla obere scars ga-apụta ìhè mgbe electroplating, n'ihi ya, na mgbakwunye na nke a chọrọ na ọ dịghị scars adị na-anwụ anwụ oghere, na irè ejection nke ejection kwesịrị nnukwu, mmekọrịta nke ojiji nke otutu ejectors na ejection usoro kwesịrị ịdị mma, na ejection ike kwesịrị edo.
4. Iyuzucha: Iji gbochie nsị ọjọọ n'oge usoro njuju ahụ, gbaa agbaze agbaze na nke doro anya, ọ chọrọ ka ịmepe oghere ma ọ bụ oghere oghere na omimi nke na-erughị 0.04 mm iji kwado mmezi nke gas site na gbazee inch. 5. Onye na-agba ọsọ na ọnụ ụzọ ámá: Iji mee ka ABS gbazee jupụta akụkụ niile nke oghere ozugbo o kwere mee, dayameta nke onye na-agba ọsọ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 5 mm, ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ ámá kwesịrị karịa 30% nke ọkpụrụkpụ nke ngwaahịa, na ogologo nke ogologo akụkụ (na-ezo aka na akụkụ nke ga-abanye oghere) kwesịrị ịdị ihe dị ka 1 mm. Ekwesịrị ikpebi ọnọdụ nke ọnụ ụzọ ámá dị ka ihe achọrọ nke ngwaahịa na ntụziaka nke ihe na-asọ. Anaghị ekwe Ramp ka ọ dịrị na mkpuchi mkpuchi maka ngwaahịa ndị kwesịrị ịmegharị.
Ọgwụgwọ elu na ịchọ mmaABS dị mfe na-ese na agba. Enwere ike ịgbanye ya na igwe na electroplating. Ya mere, ABS akụkụ na-mma ma na-echebe site tinting injection ịkpụzi na spraying, silk obibi akwụkwọ, electroplating na-ekpo ọkụ zọ n'elu nke ịkpụzi akụkụ. 1. ABS nwere ezigbo ọgwụ njirimara, ma nwee ike inweta akararị ọka, foogu, ezigbo na enyo enyo site na ọnwu. 2. ABS nwere ezigbo agba mmekọrita, ọ dịkwa mfe ịnweta ihu agba dị iche iche site na ị na-agba mmiri. Na ihuenyo na-ebi akwụkwọ dị iche iche na usoro. 3. ABS nwere ezigbo electrochemical plating e ji mara na ọ bụ naanị plastik na ike n'ụzọ dị mfe inwe metal elu site electroless plating. Electroless plating ụzọ na-agụnye electroless ọla kọpa plating, electroless nickel plating, electroless silver plating na electroless plating plating.
Nke gara aga: China OEM Die Nkedo Products Quotes - CNC machining - Mestech
Osote: Ngwaahịa gbakọta
Automobile bompa na injection ịkpụzi
Naịlọn shaft maka ọkụ eletrik eletrik dị elu